Nabadsugidda: ''Howlo lagu carqaladaynayo doorashada'' - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir Kayd ah Foto: Sawirka: Jessica Gow/TT, Tomas Oneborg/TT.
Nabadsugidda: ''Howlo lagu carqaladaynayo doorashada''
Publicerat torsdag 30 augusti 2018 kl 11.51
Doorashadii dalka ka dhici lahayd oo ay ka harsan tahay tobaneeyo maalmood ayuu ciidanka nabad sugiddu sheegayaa inay arkeen kororka arrimo la doonayo in lagu saameeyo kalsoonida dadka ka qayb gelaya doorashada.
Tusaale ahaan, waxaa dhici kara weerarro dhanka internet-ka ah oo lagu qaadayo hayadaha iyo ururrada lala xiriirinayo inay maamulaan doorashada. Linda Escar, waa kaaliye madax-qaybeedka ciidamada amaanka Säpo, waxayna sheegtay in xitaa la bilaabay olole warbaahinta caalamiga ah loogu gudbinayo warar been ah oo Sweden u sawiraya sidii dal foowdo ah.
"Waxaan aragnay kororka howlo aan horey u dhicin doorashadii 2014-kii, waxaa ka mid noqon kara weerarro elektaroonik ah oo dhanka internet-ka ah, " ayay tiri Linda Escar, oo ah kaaliye madax-qaybeed ee ciidamada nabad sugidda Säpo.
Sida ay sheegayaan ciidamada nabad sugidda ee Säpo, waxay hayaan raadad ku aaddan, weerarro lagu bartilmaameedsanayo axsaabta siyaasadeed ama hay’adaha maamulaya doorashada, balse weli ma aysan bixinin xog mucayin ah ama tirada weerarrada ilaa haatan dhacay iyo cidda ka dambaysa, baaritaannada oo weli soconaya darteed. Sida ay qabto isla Linda Escar.
"Waxaannu gacanta ku haynaa dhacdooyin iyo howlo kala duwan, in aan sheegno cidda ka dambaysana waa hal xiraale ay baarayaan qaybeheenna kale ee sirdoonku. Sida ay u badan tahayna sawirka aannu doonayno wuxuu soo bixi doonaa doorashada kaddib," ayay tiri Linda Escar.
Marka doorashada la eego, waaxaha amaanka iyo hay’adaha kale qaarkood ayaa kordhiyay u diyaarsanaanta ay kula macaamili karaan wax loogu yeero howlgallada saamaynta ee uu dal kale ama urur qalaad isku dayayo inuu ku saameeyo kalsoonida iyo dookha qofka codeeynaya.
Ciidamada nabadsugidda Sweden ee Säpo ayaa ka digaya in ay weeraradaasi kordhi doonaan todobaadyada soo aaddan iyo xitaa maalinta doorashada oo ku beegan 9-ka Sebtembar, iyadoo waxyaabaha la isku deyi karo ay ka mid yihiin xogag been abuur ah oo bulshada la gaarsiiyo, sida halka laga codeeynayo iyo sida loo codeeynayo, Linda Escar ayaase sheegtay in arrimahaasi il gaar ah lagu hayo.
"Waxaa muhim ah in laga warqabo qofka xogta soo diray, hay’adaha ka masuulka ah doorashada ayaa iyaguna u diyaarsan inay bixiyaan xogta saxda ah iyo sida wax loo sameeynayo, marka waa inaad raadsataa xogta saxda ah ee aad u baahan tahay, " ayay tiri Linda Escar, oo ah kaaliyaha madax-qaybeedka ciidamada amaanka Säpo.